Luka Asɛmpa 10:1-42
Yesu somaa asuafo 70 no (1-12)
Nkurow a wɔansakra no nnue (13-16)
Asuafo 70 no san bae (17-20)
Yesu yii n’Agya ayɛ sɛ wadom ahobrɛasefo (21-24)
Samariani mmɔborɔhunufo ho mfatoho no (25-37)
Yesu kɔsraa Marta ne Maria (38-42)
10 Eyinom akyi no, Awurade paw asuafo 70 foforo, na ɔsomaa wɔn baanu baanu+ dii n’anim kɔɔ kurow biara ne baabiara a na ɔno ankasa rebɛkɔ no. 2 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea ɛwom ne sɛ, afuw no mu nnɔbae a ɛsɛ sɛ wotwa no dɔɔso, nanso adwumayɛfo no sua. Enti monsrɛ afuw Wura no, na ɔnsoma adwumayɛfo mmetwa ne nnɔbae no bi.+ 3 Monkɔ! Hwɛ! meresoma mo sɛ nguan mma akɔ mpataku mu.+ 4 Mommfa sika kotoku, anaa aduan bɔtɔ, anaa mpaboa,+ na munnkyia obiara* wɔ kwan so. 5 Baabiara a mubewura ofi bi mu no, munni kan nka sɛ, ‘Asomdwoe mmra ofi yi so.’+ 6 Sɛ obi a ɔmpɛ asomdwoe wɔ hɔ a, mo asomdwoe bɛsan aba mo so. Na sɛ obi a ɔpɛ asomdwoe* wɔ hɔ a, mo asomdwoe bɛtena no so. 7 Enti montena saa ofi no mu,+ na nea wɔde bɛma mo no, munni na monnom,+ efisɛ odwumayɛni akatua sɛ no.+ Munntu mmfi ofie baako mu nnkɔ ofie foforo mu. 8 “Afei nso, kurow biara a mubewura mu no, sɛ wogye mo a, munni nea wɔde besi mo anim biara; 9 monsa emu ayarefo yare, na monka nkyerɛ wɔn sɛ: ‘Onyankopɔn Ahenni no abɛn mo.’+ 10 Nanso kurow biara a mubewura mu no, sɛ wɔannye mo a, mumpue nkɔ n’abɔnten so, na monka sɛ: 11 ‘Mo kurow yi mu mfuturu a eguu yɛn nan ho mpo, yɛporoporow gu mo so.+ Nanso, munhu sɛ Onyankopɔn Ahenni no abɛn.’ 12 Mereka akyerɛ mo sɛ, saa da no, nea ɛbɛto saa kurow no, ɛbɛkyɛn Sodom.+ 13 “Korasin, due! Betsaida, due! Efisɛ anwonwade a ɛkɔɔ so wɔ mo mu no, sɛ ɛkɔɔ so wɔ Tiro ne Sidon a, anka wɔasakra afurafura awerɛhow ntama* atenatena nsõ mu dedaadaw.+ 14 Enti nea ɛbɛto mo atemmu mu no, ɛbɛkyɛn Tiro ne Sidon. 15 Na wo Kapernaum, wɔbɛma wo so akɔ soro anaa? Ɔdamoa* mu na wubesian akɔ! 16 “Nea otie mo no, otie me.+ Na nea ontie mo no, ontie me nso. Afei nso, nea ontie me no, ontie Nea ɔsomaa me no nso.”+ 17 Na 70 no de anigye san bae bɛkae sɛ: “Awurade, wo din+ a yɛde yɛ adwuma nti, ahonhommɔne mpo brɛ wɔn ho ase ma yɛn.” 18 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mahu sɛ Satan fi soro abɛhwe fam+ te sɛ anyinam. 19 Hwɛ! mama mo tumi a mode betiatia awɔ ne nkekantwɛre so, ne nea mode bedi ɔtamfo no tumi nyinaa so,+ na biribiara rentumi nyɛ mo. 20 Nanso munnni ahurusi sɛ ahonhom brɛ wɔn ho ase ma mo, na mmom munni ahurusi efisɛ wɔakyerɛw mo din wɔ soro.”+ 21 Saa bere no ara, honhom kronkron hyɛɛ Yesu ma, na n’ani gyei papaapa, na ɔkae sɛ: “Agya, ɔsoro ne asaase Wura, miyi wo ayɛ wɔ baguam, efisɛ wode eyinom asie anyansafo ne animdefo+ fee, na woayi no adi akyerɛ mmofra nkumaa. O Agya, ɛyɛ ampa, efisɛ eyi ne ɔkwan a ɛsɔ w’ani.+ 22 M’Agya de nneɛma nyinaa ahyɛ me nsa. Obiara nnim onipa ko a Ɔba no yɛ, gye Agya no, na obiara nnim onipa ko a Agya no yɛ, gye Ɔba no,+ ne nea Ɔba no pɛ sɛ ɔda Agya no adi kyerɛ no no.”+ 23 Afei ɔdan ne ho kyerɛɛ n’asuafo no nko ara, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Anigye ne ani a ehu nneɛma a seesei muhu yi.+ 24 Na mereka akyerɛ mo sɛ, ná adiyifo ne ahemfo bebree pɛ sɛ wohu nneɛma a seesei muhu yi, nanso wɔanhu;+ ná wɔpɛ sɛ wɔte nsɛm a mote yi, nanso wɔante.” 25 Na, hwɛ! ɔbarima bi a onim Mmara no sɔree sɛ ɔresɔ Yesu ahwɛ, na obisaa no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, dɛn na meyɛ a menya daa nkwa?”+ 26 Yesu bisaa no sɛ: “Dɛn na wɔakyerɛw wɔ Mmara no mu? Bere a wokenkanee no, wotee ase dɛn?” 27 Obuae sɛ: “‘Ɛsɛ sɛ wode wo koma nyinaa ne wo kra* nyinaa ne w’ahoɔden nyinaa ne w’adwene nyinaa dɔ Yehowa* wo Nyankopɔn,’+ na ‘wodɔ wo yɔnko sɛ wo ho.’”+ 28 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Woabua no yiye; kɔ so yɛ eyi na wubenya nkwa.”+ 29 Nanso, ná ɔbarima no pɛ sɛ obu ne ho bem,+ enti obisaa Yesu sɛ: “Hena paa ne me yɔnko?” 30 Yesu buae sɛ: “Ná ɔbarima bi fi Yerusalem resian akɔ Yeriko, na ɔkɔtɔɔ akorɔmfo werɛmfo mu. Wɔworɔw ne ho ntaade bobɔɔ no, na wogyaw no hɔ kɔe a na ɔreyɛ awu. 31 Na ɛbae sɛ ɔsɔfo bi sian betwaa mu wɔ saa kwan no so, nanso bere a ohuu ɔbarima a ɔreyɛ awu no, ɔkɔfaa baabi foforo koraa. 32 Na Lewini bi nso bɛfaa hɔ, na bere a ohuu ɔbarima no, ɔno nso faa baabi foforo koraa. 33 Afei Samariani+ bi a ɔnam kwan no so retu kwan bepuee ɔbarima no so, na bere a ohuu no no, ɔyɛɛ no mmɔbɔ. 34 Enti ɔbɛn no, na ohwiee ngo ne nsã* guu n’akuru no so, na ɔkyekyeree. Afei ɔde no tenaa n’ankasa aboa so, na ɔde no kɔɔ ahɔhodan bi mu kɔhwɛɛ no. 35 Ade kyee no, oyii denare* abien de maa onipa a ɔhwɛ ahɔhodan no so no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Hwɛ no, na ɛka biara a wobɛbɔ aka ho no, mesan ba a metua ama wo.’ 36 Nnipa baasa yi, wɔn mu hena na wususuw sɛ ɔde ne nneyɛe kyerɛe sɛ ɔyɛ ɔbarima a ɔkɔtɔɔ akorɔmfo werɛmfo mu no yɔnko?”+ 37 Ɔkae sɛ: “Nea ohuu no mmɔbɔ no.”+ Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ, na wo nso kɔyɛ saa ara.”+ 38 Bere a wɔnam kwan so rekɔ no, ɔkɔɔ akuraa bi ase. Ɛhɔ na ɔbea bi a wɔfrɛ no Marta+ gyee no kɔɔ ne fi kɔsom no hɔho. 39 Ná saa ɔbea yi wɔ nuabea bi nso a wɔfrɛ no Maria. Na Maria tenaa Awurade nan ase, na Awurade asɛm no ara na na ɔretie. 40 Nanso Marta de, na nnwuma bebree agye n’adwene. Enti ɔbaa Yesu nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, enti me nuabea no agyaw me nko ara ama mereyɛ ade yi, wunhu? Ka kyerɛ no na ɔmmɛboa me.” 41 Ɛnna Awurade ka kyerɛɛ no sɛ: “Marta, Marta, wudwinnwen bebree, na wode nneɛma pii haw wo ho. 42 Nanso nneɛma kakraa bi na ehia, anaa baako pɛ mpo. Maria de, wapaw nea ɛyɛ papa,*+ na obiara rennye mfi ne nsam.”
^ Anaa “monnyɛ obiara atuu mmfa nnkyia.”
^ Anaa “asomdwoe nipa.”
^ Anaa “Hades,” kyerɛ sɛ, adasamma damoa. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Hwɛ Nkh. B14.
^ Anaa “papa paa.”